Shiinaha 5XZC-L Nadiifiyaha Abuurka Shaybaarka & Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | SYNMEC
Magaca Nadiifiyaha abuur shaybaadhka iyo darajada
Awood 100 kg/h
Awoodda hawada afuufaysa 0.75 kw
Awood gariir 0.37 kw
Inta jeer ee gariir 0-400 jeer/min
Balaadhan 15 mm
Cabirka 1500×1170×2220 mm
Tilmaanta hawada afuufaya DF-6,,1210mmHG
Tilmaanta matoorka hawada afuufaya 2800r/daqiiqo,220V,50Hz
Tilmaanta matoorka gariirka YS-7124,1400 r/daqiiqo
Nadiifiyaha abuurka 5XZC-L & grader waa nadiifiye sax ah oo nadiifinta walxaha qayb ka ah iyo darajaynta. Waxay ku habboon tahay in la kala saaro dhammaan noocyada abuurka sida miraha abuurka, miraha cawska, miraha ubaxa, miraha khudradda, miraha geedaha iyo wixii la mid ah.
Waa qaab dhismeedka shaashadda hawada oo leh nidaamyada nadiifinta hawada hore iyo dambe. Nidaamka nadiifinta hawada, waxay ka saartaa boodhka, wasakhda khafiifka ah iyo badarka aan la buuxin. Jirridda Sieve waxay ku qalabaysan tahay saddex lakab oo shaandheeyo kuwaas oo lagu kala saari jiray wasakh weyn, iniin waaweyn, iyo iniin yar oo wasakh ah. Ka dib markii la farsameeyo, iniin tayo leh ayaa la kala saaraa.
Mashiinka nadiifinta abuurka waxaa inta badan loo isticmaalaa dhammaan noocyada kala duwan ee baaritaanka sifooyinka abuurista. Waxa kale oo si weyn loo isticmaalaa nadiifinta abuurka qiimaha sare leh iyo kala soocidda cabbirka. Mashiinku waa qaab dhismeedka shaashadda hawada. Waxay leedahay marin hore iyo gadaal oo kala saaraya tuubooyinka hawada, si aad u nadiifiso boodhka, wasakhda khafiifka ah iyo badarka wasakhaysan ee miraha wanaagsan. Jirridda shaandhada gariirada ayaa lagu rakibay 3 lakab oo shaandho ah oo ku yaal qaybta sare, dhexe iyo hoose. Lakabka shaandhada kowaad waxa loo isticmaalaa in lagu kala saaro wasakhda waaweyn & iniinaha waaweyn. Lakabka shaandhada labaad waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro wasakhda yar & abuur yar. Iniinta inteeda kale waa iniin tayo leh waxayna aadayaan meesha ugu weyn ee laga soo daayo. Adigoo hagaajinaya badhanka soo noqnoqda ee jirridda shaandhada gariirka, waxaad xakameyn kartaa xawaaraha walxaha ku socda dusha shaashadda shaandho. Markaa waxaad si fiican u maareyn kartaa tayada nadiifinta abuurka adoo hagaajiya inta jeer ee gariirka jirridda. Hawada boodhka leh ee la soo saaro dabaysha ka dib ayaa la sii dayn doonaa shaandhaynta ka dib. Tani waa naqshad ilaalinta deegaanka.
Nadiifiyaha abuur shaybaadhka iyo dhismaha darajada:
2. Electromagnetism feederiyaha gariir 3. Jirka gariirka
4. Kala saara boodhka duufaanka
5. Guddiga xakamaynta
6. Qalabka mashiinka
7. Habka wadista
8. Nidaamyada nadiifinta hawada laba jeer
Hore: 5XZ-L Kala soocida Culayska Shaybaadhka
Xiga: 5XWY mashiinnada kala saarista hadhuudhka dhererka dhululubada jeexan dherer ahaan
Nadiifiyaha Hadhuudhka Iyo Grader
Darajada Dhererka Bariiska